Caalamka Online » Akhriso Warbixin+ Qaaraanka ay Qadar Ku Deeqday Soomaaliya, Qofba si u Qaaday
Akhriso Warbixin+ Qaaraanka ay Qadar Ku Deeqday Soomaaliya, Qofba si u Qaaday
November 29, 2017 - Written by caalamka - Edited bycaalamka
Dowladnimada Soomaaliya wixii ka danbeeyey dowladii uu madaxweynah ka ahaa Eebbe ha naxariistee Maxamed Siyaad Bare ma jirin heshiis rasmi ah oo lagu maalgalinayo dalka ama lagu siinayo dowladihii soo maray dalka dhaqaale wax ku ool ah oo dalka iyo dadka wax loogu qaban karo.
Lacagtii ugu badnayd ee hal mar la siiyo dowladii hore ayaa ahayd in ($ 50 milyan oo doolar) oo ay bixisay dowlada sucuudiga, lakiin shuruudaha ku xiranaa lacagtaas ayaa ahayd in la gooyo xiriirka siyaasadeed ee Dowladda Iraana la leedahay Soomaaliya, waxaana go’aankaas lagu fuliyey in kayar usbuuc. Halka ka akhriso lifaaqa qoraal ay soo qortay Rauters xiligaas, Waxaa kale oo jiray lacago aan badnayn oo cadaan ah oo soo galay dalka, kuwaas oo dhamaan watay shuruudo adag. Waxaase marna la ilaabi karin in dowlada Turkiga oo ah dowlada kaliya ee kabta Miisaaniayadda dowladda sanad kasta aysan wax shuruud ah ku xirin gar-gaarka ay siiso Soomaaliya, waxayna dalka ka qabteen wax la taaban karo laga soo bilaabo 2011-kii.
Dowlada Soomaaliya oo ku fa’iiday Siyaasadii dhex dhexaadnimada ahayd”
Halkaan kala bax lifaaqa war-saxaafadeedka ay soo saartay Wasaarada Arrimaha Dibadda Soomaaliya Waxaan xasuustaa xiligii Dowladda Cabdullahi Yusuf Axmed AUN Madaxwynaha ka ahaa oo ay daganayd magaalada Jowhar 2005-tii, ayaa waxaa booqosho noogu yimid safiirka Shiinaha u fahdiya Kenya, wuxuuna noo keenay jeeg ay ku qoran tahay $100,000 (Boqol Kun oo dollar) waxaana loo qabtay xaflad lagu gudoonsiinayo dowlada lacagtaas. Waxyna maalinkaas noogu dhignayd marka loo fiiriyo duruufta dhaqaale ee xiligaas jirtay mucaawino aad u balaaran oo naga soo gaartay dalweynaha Shiinaha. Hada marka la fiirsho baahiyaha ay Soomaaliya qabto ee dhan kasta ah $ 200,000 Milyan maahan lacag badan, balse wadan ku dhiiraday inuu intaas bixiyo waxaan u ahayn abaal weyn, taariikhada ayaana xusi doonta deeqda Qadar ay bixisay.
Gabagbadii, madaxweyne Maxamed Cabdullahi Farmaajo ayaa guulo wax ku ool ah ka soo hooyey siyaasada arrimaha dibaada, wuxuuna salka u dhigay xiriirka Soomaaliya kala dhaxeeya caalamka iyo dalalka aan dariska nahay. Waxaan sidoo kale amaan iyo bogaadin u soo jeedinaya dowladda Qadar oo si deeqsinimo ah dhaqaale aad u faro badan ugu deeqaday Soomaaliya, dhaqaalahaas oo noqonaya kii ugu badnaa oo hal mar la siiyo dowlada Soomaaliya. Waxayna daliil u tahay in dowladnimada Soomaaliya ay qaangaar noqotay isla markaan abuurtay jawi hufnaan iyo is aaminaad ku dhisan. Waxaan aad u rajaynaa inaan la dayicin fursadan oo qandaraaska lagu bixinayo dhismaha wadooyinka la siiyo shirkado aqoon durugsan u leh dhismaha Laamiyada si xor ah oo xalaal ahna loogu tartamo.
Qoraa: Diraac Fagaase